Delivra Inowedzera E-Commerce Yemunhu uye Chikamu | Martech Zone
Delivra Inowedzera E-Commerce Yemunhu uye Chikamu
Mugovera, July 9, 2016 Chishanu, July 8, 2016 Douglas Karr
Dhipatimendi reUS Commerce Zvinonzi iyo yekutengesa kwepamhepo yakawana chikamu chinopfuura chetatu chehuwandu hwevatengesi vekutengesa kukura muna 2015. Tsvagurudzo iyi yakaratidzawo kuti kutengesa kwepamhepo kwakawana 7.3 muzana yezvese zvekutengesa muna 2015, kubva pa6.4 muzana muna2014.
Email kushambadzira mishandirapamwe inoitiswa zvinopfuura zvinomwe muzana yeese e-commerce transaction, ichiita iyo yechipiri inoshanda kwazvo ecommerce kushambadzira chishandiso kuseri kwepamhepo yekutsvaga basa, iro rinozvirumbidza ne15.8 muzana kutendeuka mwero. Kunyangwe paine kushanda kwayo, havasi vese vatengesi vepamhepo vanogadzirwa vakaenzana maererano nemabhajeti ekushambadzira nevashandi.
Kuna Neil Berman, muvambi, uye CEO weDelivra, zviri pachena kuti nhasi e-commerce hupfumi hunosiya musuwo wakavhurika kune vazhinji vanopa software kuti vabudirire kushandira zvakasiyana siyana zvinodiwa nevatengesi mukati medenga.
Haisi chakavanzika vatengesi vepamusoro zana pasirese vanogona kutora epamusoro uye yakasimba email email kushambadzira software nekuti vane makuru, akazvitsaurira e-commerce zvikwata kuti vadzidze huwandu hwakawanda hweanoshanda eanoshanda kuuraya. Kune zvakare akawanda emuno neatunhu epamhepo vatengesi vasina timu yakazvipira yekutengesa muzviitiko zvakawanda. Zvakakosha kune vatengesi kuti vawane mari pakubudirira email inounza ku e-commerce, asi ivo vari kuda chikuva chinopa izvo zvakakosha zvekureruka kwekushandisa uye nekukurumidza kunyorera.
Delivra Commerce Ongororo
Delivra Commerce ndiyo yazvino package kubva kune email kushambadzira software mupi uye yakatsaurirwa kune e-commerce kushambadzira otomatiki. Yakavakirwa pakatenderedzwa kusangana neMagento, Shopify, uye WooCommerce, chikuva chakanakira vashoma uye vepakati-vepamhepo vatengesi vepamhepo - vaine kana vasina kutsigira zvidhinha nedhaka nzvimbo - uye inobvumidza yepamusoro post-kutenga email email kushambadzira. Yakasarudzika yekutenga ngoro yekusiya maemail zvakare ndeimwe yeakakurumbira maficha kubvira tsvakurudzo inoratidza kuti makumi matanhatu muzana emaemail engoro akasiiwa anounza mari, mazhinji acho achiitika mumaawa makumi maviri nemana ekutanga eemail iri kutumirwa.
Iyo software's chaiyo-nguva yekutenga ngoro kusangana inosanganisa vatengesi vepamhepo mukusimudzira zvigadzirwa zvigadzirwa, kugadzirisa zviitiko zvevatengi, uye kutaurazve kune vatengi vese kuburikidza neakazvimirira, emaimeri emaemail. Delivra Commerce inoita kuti vashandisi vagadzire vega zvikamu zvichibva pane yakawiriranwa yekutenga data kubva Magento uye WooCommerce Mapato, kana Shopify mhando dzechigadzirwa, kuyambuka-kutengesa chigadzirwa uye kuitazve zvekare vatengi vekare. Pamusoro pezvo, vashandisi vanogona kuteedzera mari yekupihwa kubva kuemail kuronga nzira dzekutumira mune ramangwana uye nyore kutumira mameseji akasiyiwa engoro kuti vadzore mikana yemari uye kuwedzera kushambadzira kweemail ROI.
Yevashandisi yakatarwa yekutenga ngoro kusangana inosangana otomatiki zvikamu zvinoenderana nekutenga kubva kuchikuva zvikamu kana zvigadzirwa zvigadzirwa.
Delivra Commerce vashandisi vanogona zvakare kugadzira avo ega zvikamu kuti zvishandiswe zvenguva dzose, kupatsanura bvunzo, uye zvakakonzera kutumira tsamba. Mienzaniso zvikamu zvinosanganisira:
Kushandiswa kwedata rakasiiwa data kugadzira zvakakonzera kutumira tsamba
Kushandiswa kwedata reodha ku tengesa-tengesa zvimwe zvigadzirwa
Kushandiswa kweodha yedhata yekukumbira product product reviews
Chimwe chinhu chakakosha kugona kugadzira "mureza chiitiko" zvichibva pakutenga kubva pakutumira tsamba, zvichibvumira vashandisi "kuseta uye kukanganwa" michina yekuzvidzivirira vachidzora nguva uye meseji yekutaurirana zvine chekuita nezvekutengeserana. Zviitiko zvine mureza zvinobvumidza mushambadzi kuti aongorore zviyero, uye bazi danho rekufamba-famba munzira mbiri. Semuenzaniso, mushambadzi angasarudza kuongorora kuti kana anogamuchira akavhura tsamba kana kudzvanya, akabaya pane imwe link, yakatengwa kuchitoro chee-commerce, nezvimwe. Zviitiko zvine mureza zvakakosha nekuti zvinobvumidza mushambadzi kutonga zvichaitwa zvinotevera kune iye anogamuchira, zvichibva pane zvakaitwa neanogamuchira kana kusaita. Mushambadzi anogona kusarudza kutumira maemail akasiyana, kugadzirisa data data kana kutumira mameseji eSMS.
Delivra Commerce inosanganisirawo kusangana ne Google Analytics Ecommerce. Kuisa data kubva kuGoogle Analytics, kusangana uku kunotendera vashandisi kuwana metriki dzakakosha senge mari, kutenga uye shanduko mitengo, uye nemabatiro avanoitwa kune yega tsamba yekutumira neemail zvese. Pamusoro pekubatanidzwa kweGoogle Analytics, tsamba dzekutumira dzinotaurwawo mumafomati ekutsanangura kuwongorora kweakaunzi, kuongororwa kwepositi, huwandu hwekutevera, huwandu hwekuendesa uye kuenzanisa kwekutumira.
Kutanga neDelivra Commerce mashandiro ane simba inzira yekukurumidza yevashandisi vatsva uye varipo. Kunyangwe kukwidziridzwa kana kutanga account yevatengi, Delivra inogona kuyananisa chikuva nedata revatengi rekutenga ngoro mune ingangoita awa imwe.
Tags: yakasiya ngoro emaildelivradelivra commerceecommerce emailegoogle analytics ecommerceMagentomagento emailshopifyshopu emailyakatanga emailwoocommerceemail woocommerce
Dynamic Terevhizheni Shanduko Inoenderera
Nhema dzeDMP Mukushambadzira